people Nepal » केटीहरू केटाहरूका यी अङ्ग देखेर हुरूक्कै हुन्छन् ! केटीहरू केटाहरूका यी अङ्ग देखेर हुरूक्कै हुन्छन् ! – people Nepal
केटीहरू केटाहरूका यी अङ्ग देखेर हुरूक्कै हुन्छन् !
यदि तपाई पनि कुनै केटीलाई इम्प्रेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई उसको मनपर्ने कुराको बारेमा केही पनि थाहा छैन भने जान्नुहोस कि पुरुषहरुको यी अंगहरु देखेर दिवाना हुन्छन केटीहरु। हो , जुन तरिकाले पुरुषहरुले महिलाको खास अंग अत्यन्तै मन पराउँछन् त्यसरी नै महिलाहरुले पनि पुरुषहरुको यी खास अंगहरु निकै नै मन पराउँछन्।
एब्स: एक अध्ययनले यो कुरा साबित गरिसकेको छ कि ज्यादातर केटीहरु पुरुषमा सबैभन्दा पहिले एब्स हेर्छन। आकर्षक एब्स भएको पुरुषसँग सम्बन्ध बनाउन केटीहरु निकै लालायित हुनेगर्छन । त्यसैले आजकल अधिकांस युवाहरु जिममा पसिना बगाईरहेका देख्न सकिन्छ। यस्ता पुरुषहरुप्रति आकर्षित हुनु केटीहरुका लागि सामान्य कुरा हो।
दारी-जुँगा: यदि कुनै पुरुषको दारी-जुँगा आकर्षक छ भने उसका लागि कुनै पनि केटीलाई आफूतिर आकर्षित गर्न झन् सजिलो हुन्छ। यदि तपाईको दारी-जुँगा राम्रो, आकर्षक छ भने यकिन गर्नुहोस कि तपाई देखेर केटीहरु फिदा हुन्छन। दारी-जुँगाले पुरुषको हटनेस बढाउँछ र केटीहरु यसबाट आकर्षित हुन्छन्।
अनुहार: यदि तपाई सोच्नुहुन्छ होला कि केटीहरु या महिलाहरु यस्ता पुरुषहरुबाट बढी इम्प्रेस हुन्छन जो देख्नमा क्युट हुन्छ, त्यसो भए तपाई गलत हुनुहुन्छ। केटीहरु यस्ता पुरुषहरु मन पराउँछन् जो हेर्दा परिपक्व हुन्छ। प्रायजसो केटीहरु यस्ता पुरुषहरु मन पराउँछन् जसको दारी होस् र जुँगा पनि होस्। त्यसै कारण आजकाल दारी-जुँगा पाल्ने फेसन चरम सीमा पुगेको छ। मजबूत हात: पुरुषहरुको यी अंगहरु देखेर केटीहरु दिवानी त हुन्छन , तर उनीहरु पुरुषको हरेक स(साना कुराहरुमा पनि ध्यान दिन्छन। प्रायजसो केटीहरु पुरुषको मजबूत हातलाई निकै मन पराउँछन्।
फराकिलो काँध: यो कुरा त सधैँ नै देखी नै रहेको छ कि केटीहरु फराकिलो काँध भएको पुरुषहरुलाई निकै मन पराउँछिन्। फराकिलो काँध र एब्सले पुरुषको सेक्सीनेस वृद्धि गर्दछ, जुन देखेर हरेक महिलाहरु उनीहरुप्रति फिदा हुन्छन।